तनहुँमा बाढी-पहिराेकाे वितण्डा : २ जनाकाे मृत्यु, घर र पुल बगे, खेत पुरियाे (तस्वीरमा) « News24 : Premium News Channel
तनहुँमा बाढी-पहिराेकाे वितण्डा : २ जनाकाे मृत्यु, घर र पुल बगे, खेत पुरियाे (तस्वीरमा)
- सविन लामिछाने
तनहुँ । तनहुँका खाेलामा बाढी तथा पहिराेबाट धनजनकाे क्षति भएकाे छ । बन्दीपुर- ३ तामुङमा पहिरोले ३ घर पुरेको छ । पहिरोबाट २ जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडा सदस्य खड्गबहादुर थापाले बताए ।
पहिरोबाट सोही जडाका करिब ३० बर्षिय सरस्वती थपा र ७० वर्षीय हरीमाया बसेलको निधन भएको वडा सदस्य थापाले बताए । पहिरोबाट ३ जना घाइते भएकाे तनहुँका नि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले जनाएका छन् । एक जनाकाे अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूकाे हाल दमाैली अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे जनाइएकाे छ ।
घर माथिबाट खसेको पहिरोले घर पुरेको गाउँपालिकाका उप प्रमुख करुणा गुरुङ्गले बताइन् । उनका अनसार घटनास्थलमा जन प्रतिनिधिहरुको टोली जाँदै छ। घटनास्थल जाने सडकहरु पहिरोले बन्द रहेकाले पैदल नै घटना स्थल जाने तयारी जनप्रनिधिहरुको रहेको छ ।
यसैगरी मङ्गलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण तनहुँको म्याग्दे खोलामा आएको बाढीले धानखेत डुबाएकाे छ । असारको दोस्रो साता आठ रोपनीमा रोपेको धान खोलाले डुबाएको म्याग्दे गाउँपालिका–६ का दीर्घबहादुर भण्डारीले बताए ।
केही ठाउँमा पुल तथा घर र गाेठहरू बगेका छन् भने केही बेपत्ता रहेका छन् । पहिराेका कारण पृथ्वी राजमार्ग समते अवरूद्ध भएकाे छ ।